‘विराना’की यि अभिनेत्रीसंग रात बिताउँन चाहान्थे अंडरवर्ल्ड डन,त्यसपछि के भयो ? - samayapost.com
‘विराना’की यि अभिनेत्रीसंग रात बिताउँन चाहान्थे अंडरवर्ल्ड डन,त्यसपछि के भयो ?
समयपोष्ट २०७३ चैत १७ गते ८:२१
८० को दशकमा बनेका हिन्दी फिल्महरु ‘पुरानी हवेली’, ‘बंद दरवाजा’, ‘डाक बंगला’ को अहिले पनि चर्चा हुँने गर्छ । त्यसमा पनि सन् १९८८मा बनेको फिल्म 'विराना' मानिसहरुले अझै पनि मनपराउँछन् । फिल्मको लिड रोलमा थिईन् आभिनेत्री जस्मिन ।' विराना' अघि मात्र दुई फिल्म 'सरकारी मेहमान' र 'डिभोर्स' मा देखिएकी जस्मिन 'विराना' रिलिज भएपछि पछि निकै चर्चित बनिन् ।
फिल्म 'विराना' रिलिज भएपछि जस्मिनलाई अंडरवर्ल्ड डनहरुको फोन आउँन थाल्यो । सबै डनहरु उनीसंग रात बिताउँन चहान्थे । उक्त कुराले उनलाई निकै तनाव दियो । त्यसपछि उनले भारतनै छाडिदिईन् । अहिले उनी अमेरिकामा बसोबास गर्ने गरेको बताईन्छ । विराना जस्मिनको अन्तिम चलचित्र थियो । उक्त चलचित्र पछि उनी कहिले पर्दामा देखापरिनन् ।
'विराना' रिलिज हुँदा सञ्चार माध्यमहरु अहिले जस्तो त्यति शक्तिशाली भइसकेका थिएनन् । उनका प्रशंसकहरु अहिले पनि उनको बारेमा गुगलमा खोजी गर्ने गर्छन् तर उनको बारेमा पक्का जानकारी अहिलेसम्म कसैले फेला पार्न सकेको छैन ।
कसैले उनको पुरा नाम जस्मिन भाटिया भन्ने गरेका छन् त कसैले जस्मिन धुन्ना । केही मानिसहरु उनको मृत्यु भईसकेको बताउँछन् । कसैले उनी जोर्डनमा विवाह गरेर परिवारसंग बसेकी छिन् पनि भन्ने गर्छन् तर आजसम्म पनि चर्चित भारतीय अभिनेत्री जस्मिन कहाँ छिन् त्यसको जानकारी कसैलाई छैन ।